Boky mozika tsara indrindra amin'ny 2021 | Ny boky tsara indrindra amin'ny taona - Libro Mundo
Boky mozika tsara indrindra amin'ny 2021 | Ny boky tsara indrindra amin'ny taona
Desambra 8, 2021 ny worldbook
Manana tantara mahatalanjona tokoa ilay mpihira sy mpamoron-kira: rehefa lasa nalaza izy, dia efa niharan'ny fampijaliana mahatsiravina avy amin'ny reniny, ny fitsidihan'i Jesosy, ny fijanonana tao amin'ny tokantranon'ny ankizivavy manana olana amin'ny fitondran-tena, ny tsy fahombiazan'ny faniriany. ho lasa mopera sy ny fiainany ho mpiendaka. Fa ny tena mahagaga amin'ny Rememberings dia ny fomba fitantarany azy: O'Connor dia mpanoratra tononkalo malaza, na dia manantitrantitra aza izy fa tsy izany (ny piano ao an-tranon'ny renibeny dia toa ny lakolosy matoatoa amin'ny sambo rendrika »). Izay mety ho azo takarina ao anatin’ny boky feno lolompo sy nenina dia mivadika ho feno hatsikana sy fifamelana.
Top Labels: Tantaran'ny Mozika malaza amin'ny Genre Fito
"Mampalahelo ahy foana izany rehefa misy mpitendry deraina noho ny fihoaran'ny karazana," hoy i Sanneh, mpanoratra New York ao amin'ny fampidirana ny Major Labels. Inona no tsara amin'izany? Ny andalana dia mamintina ny fikarohana nataony momba ny foko mozika: manitikitika, mampiady hevitra, manokana. Tsy voatery hiombon-kevitra amin'ny hevitr'izy ireo momba ny maha-zava-dehibe ny karazana (rock, r'n'b, country ary hip-hop eo amin'izy ireo ianao) raha te hahita ilay boky mahavariana - mihantsy ny heviny. Nambarany fa niharatsy ny Dixie Chicks fa tsy nihatsara, rehefa tsy niraharaha ny rafitra mpandala ny nentin-drazana ao amin'ny firenena izy ireo. Ary ny tantaran'ny fivoarany manokana amin'ny sehatry ny punk amerikana dia mety ho nanao boky ho azy manokana. Na heverinao ho fiantsoana fivoriana izany na fiderana ao amin'ny tontolo iray izay toa itiavan'ny rehetra ny "kely amin'ny zava-drehetra", dia mahatonga ny famakiana miavaka sy mahasarika.
Nina Simone gum
Ny ankamaroan'ny tantaram-piainan'ny mozika dia manaraka lamina efa nampiasaina tsara: ny an'i Warren Ellis, ny ravinkazo be volombava an'i Nick Cave ao amin'ny Bad Seeds, dia tsy manao izany. Toa momba an'i Ellis nangalatra siligaoma izay nororan'i Nina Simone nandritra ny fampisehoana tao amin'ny fetiben'ny Meltdown Cave tamin'ny 1999, ary ny fomba nitondrany azy ho karazana relijiozy masina, dia mizotra amim-boninahitra. Idiosyncratic amin'ny fiainany sy ny filany, manomboka amin'ny mekanika an-dalambe, hatramin'ny fitiavany an'i Emily Dickinson sy ilay mpihira grika Entekhno Arleta. Ellis dia mandamina ny fomba fiasany miparitaka miaraka amin'ny faharanitan-tsaina sy ny hatsaran-tarehy: ny olona iray dia mahazo ny fahatsapana fa nandany fotoana niaraka tamin'ny mpitantara tantara iray manokana.
Run The Riddim: Ilay Tantara Tsy Misy Lazaina Dancehall ny nineties
Marvin Sparks (Tsy misy tantara lava)
Nandany 10 taona nikaroka sy nanoratra ny tantarany momba ny fanondranana mozika nahomby sy nanan-kery indrindra tao Jamaika i Sparks, izay nitonona ho “mpianatry ny dancehall hatry ny ela” hatramin'ny vanim-potoanan'ny varotra reggae. Ny indostrian'ny mozika Jamaikana dia mijanona ho tany lonaka ho an'ny mpanoratra: mihoatra lavitra noho ny lanjany izany raha ny lanjany ary tsy manaraka ny fitsipika mahazatra. Ity tantara ity dia tena mahatsikaiky sy mampiharihary araka ny tolo-kevitry ny lohateniny, manazava ny karazan-java-mamorona, miovaova ary indraindray mampiady hevitra sy ny kolontsaina manodidina azy. Manontany tena ianao hoe nahoana no tsy nisy nanoratra ity boky ity taloha ary nahoana i Sparks no tsy maintsy namoaka azy io.
Tononkira: 1956 hatramin'izao
Paul McCartney Allen Lane
Ny andalana voalohany amin'ny fampidirana an'i Beatle taloha amin'ny tononkira misy boky roa dia manolotra ilay boky ho karazana autobiography hafa. Fihetseham-panentanana izany, mamela an'i McCartney hiteny, matetika amin'ny fomba manazava, momba ny fiainany (tena tsara indrindra momba ny fahazazany tany Liverpool izy) ary misoroka izay rehetra tsy tiany horesahina, anisan'izany ny fanambadiany faharoa tamin'i Heather Mills voampanga. Noho izany dia lehibe ny lavaka ao amin'ny tantara ary ny fahatsapana fa tsy hahazo sary feno an'i McCartney mihitsy ilay lehilahy, fa rehefa mitsoraka ao anaty boky ianao, miaraka amin'ireo sary mahafinaritra sy ephemera voaangona, dia zara raha misy fanontaniana. .
Tsidiho ny boky nasongadina rehetra ary mitahiry hatramin'ny 15% ao amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana.
Sokajy Vaovao farany Tags taona, do, boky, ny, tsara indrindra, mozika Ticket navigation
Lalàm-panorenana sa mahaleo tena?